ASA SOA ATAON’I NANTENAINA : Ankizy 1 200 indray no hahazo kopia maimaim-poana
Mitohy ny hetsika fanomezana kopia maimaim-poana karakarain’ny mpanakanto Nantenaina. 1er avril 2019
Raha tsiahivina, ny alakamisy 21 febroary lasa teo, dia anjaran’ny faritra Tanambao Fahadimy sy Ankirihiry ary ireo mpianatra tsy mbola manana kopia ao amin’ny Epp Todivelona Raphael indray no nanatanterahana Fitsarana mitety vohitra ( jugement supplétif) ho fahazoana kopia maimaim-poana.
Ny sabotsy 30 marsa, nifampitaona tao amin’ny Epp Todivelona Raphael indray i Nantenaina sy ireo ray aman-drenin-jaza mila kopia. Natao tamin’io fotoana io ny fizarana ny didim-pitsarana tamin’ilay Fitsarana mitety vohitra natao ny 21 febroary. Ankizy manodidina ny 1 200 eo ho eo ireto nahazo didim-pitsarana ahafahana mahazo kopia ireto. Iny didim-pitsarana iny no entina eny amin’ny mpiandraikitra ny sora-piankohanana ao amin’ny Kaominina Toamasina ambonivohitra ahafahana misitraka kopia vaovao.
Raha atambatra, hatramin’ ny taon-dasa ka hatramin’izao, dia efa manodidina ny 5 000 eo ho eo ireo ankizy tsy manana kopia nahazo kopia vokatry ny hetsika kopia ataon’i Nantenaina.
Ity mpanakanto ity izay miara-miasa amin’ny Fitsarana ao Toamasina sy ny Kaominina amin’ny fanatanterahana ny hetsika. Zava-dehibe izao hetsika ara-tsosialy ataon’i Nantenaina izao satria ny kopia no lakile ahafahan’ny ankizy manokatra ny ho aviny.
Tsapa nandritra izao hetsika izao fa na dia tanàn-dehibe faharoa eto Madagasikara aza i Toamasina ary lazaina fa renivohitra ara-toekarena dia mbola maro ny zaza sy olon-dehibe tsy misy kopia.